प्रदेश नं. ५ मा दुई विधेयक संसोधनका लागि पेश - Butwal Online
बटौली, १० पुस । प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा दुई विधेयक संसोधनका लागि पेश भएका छन् । प्रदेश नं. ५ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं. ५ प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७२ घण्टा भित्र संसोधनका लागि पेश गरिएको हो ।
दुवै विधेयकलाई आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले शभामा प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गरे संगै सभामुख पुर्ण बहादुर घर्तिले दुवै विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफलमा लगेको थिए । जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयकमाथी हरि प्रसाद रिजाल, बैजनाथ दिपेन्द्र कुवरले भाग लिएका थिए । त्यस्तै आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सांसद दधिराम न्यौपाने, तुलारामम घर्ति र विष्णु प्रसाद पन्थीले भाग लिएका थिए । सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विषय माथी मन्त्री केसीले जवाफ दिएका थिए ।
त्यस अघि विशेष समयमा बोल्दै सांसद कृष्ण ध्वज खड्काले बजेट कार्यान्वयन नभएको बारे संसदमा प्रश्न गरेका थिए । उनले बजेट खर्च गर्न सरकारले योजनाहरु प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । त्यसतै सांसद अष्टभुजा पाठकले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी सांसद सन्तोष पाण्डेले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका जग्गाधनिले क्षतिपुर्ति नपाएको बताए । त्यस्तै भुवनेश्वर चौधरीले ऐतिहासिक तालको संरक्षणका सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताए ।
मंगलबारकै बैठकमा दुई वटा विधेयक संसदमा पेश भएका छन् । भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले संसदमा प्रदेश नं. ५ सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नंं ५ बीउ, बीजन सम्बन्धी व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयक पेश गरेकी हुन । संसदको अर्को बैठक पुस ११ गते दिउसो बस्नेछ ।